सस्ताे पाएपछि जुत्ता मेलामा उपभाेक्ताकाे भिड, एक जाेर किन्ने पैसाले दुइजाेर | NewsKarobar
गृहपृष्ठ सस्ताे पाएपछि जुत्ता मेलामा उपभाेक्ताकाे भिड, एक जाेर किन्ने पैसाले दुइजाेर
तपाईं बर्षमा कतिजोर जुत्ता चप्पल लगाउनु हुन्छ ? चाहिएका बेला मात्र किन्नु हुन्छ कि एकै पटक किनेर राख्नु हुन्छ ? जतिखेर चाहियो त्यतिखेर किन्न जानु भयो भने महंगोमा पर्न सक्नु हुन्छ । बर्षमा चाहिने २÷३ जोर जुत्ता सस्तोमा पाइएका बेला एकै पटक किन नकिन्ने ? राजधानीको भृकुटीमण्डप नेपाली जुत्ताचप्पल उद्योगी समुहले सुरु गरेको काठमाडौं फुटवेयर विजनेस एक्स्पो तपाईका लागि सस्तोमा जुत्ताचप्पल किन्ने उपयुक्त अबसर हुनसक्छ । अरु बेला एक जोर किन्न तिर्नु पर्ने पैसाले अहिले दुई जोर पाइयो भने एकै पटक बर्षभरिलाई किन्दा के विग्रियो र ? जुत्ता चप्पलमा बर्षभरि हुने खर्च स्वात्तै घट्ने छ । मुलुकका प्रतिष्ठित जुत्ताचप्पल उत्पादकहरु बिएफ डियर हिल, रन, क्रसरोड, हाइलाइफ, रोयल, सुल्याण्ड र ग्याज फेसन कम्पनी मिलेर बुधबारदेखि मेला सुरु गरेका हुन् ।
जुत्ताचप्पल किन्न मेला कुर्ने उपभोक्तालाई लक्षित गरिएको एक्स्पोमा बजारको भन्दा उत्पादन हेरेर १५ देखि ६० प्रतिशतसम्म छुट दिइएको मेलामा सहभागी सुल्याण्डका सुरज बन्जाडे बताउँछन् । ‘होलसेलर, डिलर, रिटेलरलाई कमिसन दिन नपर्ने भएकाले मेलामा सस्तोमा जुत्दा बेच्न सकेका हौं’ उनले भने, ‘जुत्ताचप्पल किन्ने यही मौका हो । मेला सकिनासाथ बजारमा किन्न जाँदा यहाँभन्दा निकै महंगो पर्छ । कम्तीमा अर्को बर्ष लाग्ने मेलासम्मका लागि जुत्ताचप्पल किनेर राख्नु उपयुक्त हुन्छ ।
मेला धेरै ब्राण्डबीच दाँजेर किन्ने स्थल पनि भएको छ । ‘मेलामा जुत्ता किन्नेहरुलाई भेराइटी छ,’ रन सुजका प्रबन्ध निर्देशक रुद्र न्यौपानले भने, ‘बजारमा एउटा पसलमा धेरै भेराइटीको जुत्ता छान्न उपभोक्तालाई बिकल्प हुँदैन । मेलामा ६ वटा कम्पनीका जुत्ता छानिछानी किन्न पाइन्छ ।’
मेलामा सहभागी कम्पनीहरुले २ हजारभन्दा बढी आधुनिक डिजाइनका जुत्ताचप्पल राखेको बताएका छन् । मेलामा पार्टी, स्पोर्टस, क्याजुअल, स्कुल, कार्यालयका युनिफर्म जुत्ता, महिलाले लगाउने चप्पल, गम बुटलगायत सबै प्रकारका जुत्ताचप्पल छन् । मेलामा ३ सय रुपैयाँदेखि ४ हजार रुपैयाँसम्मका जुत्ता उपलब्ध गराइएको आयोजकको भनाइ छ ।
आकर्षक र गुणस्तरीय जुत्ता विदेशबाट मगाउने ट्रेन्ड पछिल्लो समय परिवर्तन हुँदैछ । स्वदेशमै सस्तोमा गुणस्तरीय, आकर्षक जुत्ता उत्पादन गर्ने कम्पनी बढेका छन् । स्वदेशी जुत्तामा उपभोक्ताले १ बर्षसम्मको ग्यारेन्टीसमेत पाउँछन् । स्वदेशमै कस्ता जुत्ताचप्पल उत्पादन हुन थालेछन् भनेर आफ्नै आँखाले हेर्ने अबसर पनि हो मेला । ‘मेलामा आएर किन्नै पर्छ भन्ने छैन,’ ल्याण्डवाक सुजका सौरभ श्रेष्ठले भने, ‘एक पटक नेपालमा उत्पादित जुत्ताका भेराइटी हेर्न पनि उपभोक्ताहरु मेलामा आउन् भन्ने हाम्रो चाहना हो । नेपालमै कस्ताकस्ता जुत्ता उत्पादन हुन थालेछन् भनेर हरेकले थाहा पाउनु पर्छ ।’ जुत्ताचप्पलको मेलामा जुत्ताचप्पलका पारखीहरु निकै झुम्मिएका देखिन्छन् ।
मेला लागेको एक साता वित्दा उपभोक्ताको भिड बढिरहेको छ । सस्तोमा पाइएकाले परिवारका सबै सदस्यका लागि जुत्ताचप्पल किन्नेहरु धेरै छन् ।
पछिल्लाे - रोटरीले सिकायो शिक्षकशिक्षिकालाई पढाउने तरिका
अघिल्लाे - आईपीएलमा बेंगलोरको तेस्रो जित, चेन्नई १ रनले पराजित